I-powder enchancing powder: Vardenafil HCL powder VS Avanafil powder
/Blog/Avanafil , Vardenafil HCL/I-powder enchancing powder: Vardenafil HCL powder VS Avanafil powder
ezaposwa ngomhla 04 / 18 / 2018 by UDkt Patrick Young bha liweyo Avanafil, Vardenafil HCL.
Yonke into malunga neVardenafil HCL powder VS Avanafil powder
1.Vardenafil HCL powder
3. I-Powder enchancing powder isebenza njani iVardenafil HCL VS. Avanafil
4.Indlela yokusebenzisa i-sex enchancing powder Vardenafil HCL powder VS. Avanafil powder
I-5.Iziphumo zomsebenzisi kwiVardenafil HCL powder kunye ne-Avanafil powder
6.Iyiphi impembelelo ecaleni ye-Vardenafil HCL powder kunye ne-Avanafil powder?
7.Ixesha elide iVardenafil HCL?
I-8.I-Vardenafil i-HCL powder ephephile
9.I-vardenafil i-HCL powder esemthethweni
10.Uphi ukuthenga i-Vardenafil HCL powder?
UVardenafil hydrochloride (Levitra) i powder video
I. Vardenafil hydrochloride (Levitra) powder Abalinganiswa:
igama: UVardenafil hydrochloride (Levitra) powder
I-molecular Formula: C22H19N3O4
Isisindo somzimba: 389.4
Isitoreji sokugcina: 20ºC
1. Vardenafil HCL powder
I-Levitra ligama lomqondiso Vardenafil HCL powder,
imithi yomlomo esetyenziselwa ukuphathisa amadoda anesifo sobulili, eyaziwa ngokuba yi-erectile disys function or ED.
Inxalenye yeqela leziyobisi ezibizwa ngokuba yi-phosphodiesterase-5 (PDE5) inhibitors. I-PDE5 inhibitors isebenza ngokuthintela i-enzyme, i-PDE5, ekusebenzeni ngokukhawuleza kwiindawo ezithile zomzimba, kubandakanya ipenisi.
I-Vardenafil i-HCL powder, ikhulisa ukuxinaniswa kweengcambu kuloo ndawo kwaye inokunceda umntu athole kwaye aqhubeke nokulungiswa ngexesha lokwabelana ngesondo. Ngokwalo, ayiyi kubangela ukulungiswa - kufuneka kubekho ukuvuselela umzimba kwipenisi ukufezekisa ukulungiswa.
I-Vardenafil i-HCL powder, ivela ngeendlela ezimbini - iipilisi okanye ipilisi ephazamisayo (ichitheka emlonyeni, ithathwe ngaphandle kwamanzi).
Ulawulo lwezoKutya kunye neDrug (FDA) luvumile i-Vardenafil HCL powder (224785-91-5), kwi-2003. Yenziwe yi-Bayer HealthCare Pharmaceuticals kwaye ihanjiswa nguGlaxoSmithKline.
2. Avanafil powder
I-Avanafil powder isetyenziselwa ukuphatha abantu abane-erectile i-dysfunction (ebizwa ngokuba yi-sex impotence). I-Avanafil powder yile iqela lamayeza ebizwa ngokuba yi-phosphodiesterase 5 (PDE5) inhibitors. La mayeza akhusela i-enzyme ebizwa ngokuba yi-phosphodiesterase hlobo-5 ekusebenzeni ngokukhawuleza. I-penis yenye yeendawo apho le enzyme isebenza khona.
I-Erectile i-dysfunction yimeko apho ipenisi ayinzima kwaye yandisa xa umntu evuyiswa ngokwesondo, okanye xa engakwazi ukugcina ulungiso. Xa indoda ishukunyiswa ngesondo, umzimba wakhe uphendule ngokuqhelekileyo ukunyuka kwegazi kwi-penis yakhe ukuvelisa i-erection. Ngokulawula i-enzyme, avanafil powder Unceda ukugcina i-erection emva kokuba ipenisi iqhutywe ngokunyuka kwegazi kwi-penis. Ngaphandle kwesenzo somzimba kwi-penis, njengaleyo eyenzeka ngexesha lokwabelana ngesondo, i-avanafil powder ayiyi kusebenza ukwenza i-erection.
3. I-Pork enchancing powder isebenza njani? Vardenafil HCL VS. Avanafil
Ingaba kwenzeka njaniUVardenafil HCL usebenza? UAvanafil usebenza njani?
I-Vardenafil HCL inokunceda umntu athole kwaye aqhubeke nokulungiswa. Phakathi kwendawo yokwenza i-penile, i-penis igcwele igazi. Imithambo yegazi enika ipenisi ngegazi, ukwanda, kunye neenqwelo ezithatha igazi ngaphandle kwesivumelwano sepenisi. Amagumbi amakhulu amabini e-penis, eyaziwa ngokuba yi-corpus cavernosa, igcwalise ngegazi.
Njengoko igazi liqokelela kwi-penis, iziphumo zokulungiswa.
I-Vardenafil HCL yile yeklasi yezilwanyana ezibizwa ngokuba yi-phosphodiesterase type-5 (PDE5) inhibitors. I-PDE5 inhibitor igxotha i-PDE5 ekunqandeni imirhoxo. iHardardfil HCL iphakamisa ukuhamba kwegazi xa indoda isondeza ngesondo.
Isithako esisebenzayo sisebenza kwi-chain of reaction in penis ngexesha lokuvusa.
Xa indoda ivuselelwa ngokwesondo, i-nitric oxide ikhutshelwe kwi-penis yakhe, kwaye oku kubangela ukunyanga kwempendulo.Le nto ibangela i-enzyme, i-guanylate cyclase, ukuvelisa i-guanosine monophosphate (cGMP) .CGMP ilawula ukukhutshwa kunye nokuhlenga, okanye ukwanda, yeemithwalo zegazi ezithwala igazi ukuya kwi-penis.
Ukuphendula kwamakhemikhali kubangela ukuba iinqwelo zinika ipenisi ukuba ihlaziye, ngelixa abo basusa igazi kwi-contract yepenis. I-phophophodiesterase-5 (PDE5), enye i-enzyme idiliza okanye ichithe iCGMP. Xa i-cGMP ibhujiswa, imirhupha yegazi ibuyela kubukhulu bayo , ngokugqibeleleyo ukuphela ukulungiswa. UVardenafil HCL ugxotha i-PDE5 ekubhubhiseni iCGMP. Ngale ndlela, ivumela i-cGMP ukuba isebenze ixesha elide. Ngenxa yoko, kunceda ukunyusa i-erection.
Indlela yokusebenza-iVardenafil HCL powder
ukwakhiwa Penile yinkqubo hemodynamic eqalwe ukunyenyiswa zihlunu kwamagingxi kwi cavernosum corpus kunye arterioles yawo ehlobene. Ngethuba lokuvuselela ngokwesondo, i-nitric oxide ikhutshwa ekuphelelweni kwamagulane kunye neeseli zokuphela kwi-corpus cavernosum. nitric oxide iyazingenela cyclase enzyme guanylate kukhokelela ekwandeni Yindibanisela elibujikele guanosine monophosphate (cGMP) iiseli umsipha kakuhle cavernosum corpus.
I-cGMP ekubangela ukuphumla kwe-muscle elula, ukuvumela ukunyuka kwegazi kwi-penis, okubangele ukulungiswa. Uxilongo lwe-tissue of cGMP lulawulwa ngamanqanaba ama-synthesis kunye nokuhlaziywa nge-phosphodiesterases (ii-PDEs). Eyona ininzi PDE kwi corpus cavernosum oluntu i cGMP-ngqo uhlobo phosphodiesterase 5 (PDE5); Ngoko ke, ukuvimbela i-PDE5 kwandisa umsebenzi we-erectile ngokunyusa inani le-cGMP. Kungenxa yokuba kufuneke ukuvuselelwa ngokwesondo ukuqala ukukhululwa kwe-nitric oxide, ukuvalwa kwe-PDE5 akukho mphumo ekungabikho kwesondo. U-Avanafil useklasini yemithi ebizwa ngokuba yi-phosphodiesterase (PDE) inhibitors. It is used to treat erectile dysfunction (ED: ukungabi namandla; ukungakwazi ukufumana okanye ukugcina ukulungiswa kwamadoda). Lo mkhiqizo wokuphucula umntu ufumana igama lakhe kwisithako saso esisebenzayo esinceda ukujikeleza kwegazi emzimbeni ngendlela eqhelekileyo. Kukho ezinye izithako ezenza u-Avanafil usebenzise kakuhle kodwa akanalo mpe mbelelo enkulu kunye nemiphumo eyona isithako esiyintloko.
Isebenza ngokunyusa ukuhamba kwegazi kwi-penis ngexesha lokuvuselela ngokwesondo. Oku kunyuka kwegazi kungabangela ukulungiswa. I-Avanafil powder ayiphilisi i-erectile disysction okanye yandisa umnqweno wesini. I-Avanafil ayikuthinteli ukukhulelwa okanye ukusasazeka kwezifo ezithathelwana ngocansi ezifana ne-virus immunodeficiency virus (HIV).
Imisebenzi yeAvanafil powder NjengaViagra kwaye iyipilisi ephumelelayo kakhulu eya kuqinisekisayo * ukuzithemba nokusebenza kwakho ebhedini.
Kukho uphando lweklinikhi olubonisa ukuba oku kusebenzayo.
Inokuphinda isebenze kabini ngokukhawuleza njengeViagra kuxhomekeke kwindlela ophendula ngayo.
Inokukhuseleka ukusetyenziswa xa kuthelekiswa nezinye izongezelelo kwalabo abanezimo zonyango. Kanjalo kubiza kakhulu xa kuthelekiswa nezinye iimveliso.
4. Indlela yokusebenzisa i-powder enchancing powder? Vardenafil HCL powder VS. Avanafil powder
Indlela yokusebenzisa i-Vardenafil HCL powder? Indlela yokusebenzisa i-Avanafil powder?
I-Vardenafil HCL powder ingathathwa kunye okanye ngaphandle kokutya.
I-Vardenafil HCL powder idlalwa kuphela xa ifunekayo, malunga nemizuzu eyi-60 ngaphambi kokusebenza ngokwesondo. Amachiza anokunceda ukufezekisa ukulungiswa xa kuqhutywa ngesondo. Ulungiso aluyi kwenzeka kuphela ngokuthatha ipilisi. Landela imiyalelo yakho kagqirha.
Ukuthatha ithebhulethi yokutshatyalaliswa ngomlomo (Staxyn):
Gcina ithebhulethi kwi-pack ye-blister uze ulungele ukuyithatha. Vula ipakethe uze uphinde ulandele i-foil kwi-tablet blister. Musa ukutshintshela ithebhulethi kwi-foil okanye ungonakalisa ithebhulethi.
Ukusebenzisa izandla ezomileyo, susa ithebhulethi uze uyibeke emlonyeni wakho. Kuya kuqala ukutshabalalisa ngokukhawuleza.
Musa ukugwinya i-tablet ngokupheleleyo. Vumela ukuba ichithe emlonyeni wakho ngaphandle kokuhlafuna.
Gweba amaxesha amaninzi njengoko ithebhulethi ichitheka. Ungathathi iScalixy nge-liquid.
Musa thabatha uVardenafil HCL i powder ngaphezu kweyodwa ngosuku. Vumela ii-24 iiyure zidlule phakathi kwamanani.
Xhagamshelana nogqirha okanye ufune unyango lwengxamisekileyo xa unyango lwakho luba buhlungu okanye luhlala ixesha elide kuneeyure ze-4. Ukulungiswa kwexesha elide (ukunqabisa) kungonakalisa ipenisi.
Gcina kwiqondo lokushisa elisekude kumanzi kunye nobushushu. Umele ukwazi ngeli xesha ukuthatha uVanafil powder
Xelela bonke ababonelela ngempilo ukuba uyithathe eli chiza. Oku kubandakanya oogqirha bakho, abahlengikazi, amayeza kunye namazinyo.
Gweba ukuqhuba nokuqhuba eminye imisebenzi okanye izenzo ezenza ukuba uqaphele uze ubone indlela u-avanafil ekuchaphazela ngayo.
Ukunciphisa ithuba lokuziva udizzy okanye ukudlula, phakama ngokukhawuleza ukuba uhleli okanye ulele phantsi. Qaphela ukunyuka nokuhla kwezitebhisi.
Ungathathi le mayeza kunye nezinye iziyobisi ezisetyenziselwa ukuphatha utshintsho kwikhono lobulili.
Ukuba uthe wayiphuza ijusi yamagilebhisi okanye udla iidrafruit rhoqo, uthetha nodokotela wakho.
Thetha nogqirha wakho ngaphambi kokusela utywala.
Eli liyeza alinqanda ukusabalala kwezifo ezinjenge-HIV okanye i-hepatitis ezidlulayo ngegazi okanye ngesondo. Awunawo na uhlobo lwesini ngaphandle kokusebenzisa i-latex okanye i-polyurethane ikhondom. Musa ukwabelana ngeesaliti okanye ezinye izinto ezinjengeebhokhwe okanye ama-razors. Thetha nogqirha wakho.
Ingxaki yamehlo embi kakhulu ayizange ivele nge-avanafil. Oku kungakhokelela ekutshintsheni kwamehlo kwaye maxa wambi ukulahlekelwa kwamehlo, okungenakubuya. Thetha nogqirha.
Eli gama alivunyelwanga ukusetyenziswa kwabantwana.
Umlinganiselo we-Vardenafil HCL powder Umlinganiselo we-Avanafil powder
Ukuba usebenzisa ifom yephepha leplaneti Vardenafil hydrochloride i-powder, i-dose elilodwa eliphakanyisiweyo li-10-milligrams (mg) akukho ngaphezu kweyodwa ngosuku, iyure ngaphambi kokuba ulindele ukulala ngesondo.Ukuba usebenzisa ipilisi yomlomo, thatha i-10-mg eyodwa dose ngosuku ngosuku. ngesondo. Amadoda aneminyaka eyi-65 iminyaka nangaphezulu angathatha umthamo we-5-mg kanye ngosuku, iyure ngaphambi kwesondo.
I-dose ephakanyisiweyo yeVardenafil hydrochloride iya kuba eyahlukileyo kumadoda ahlukeneyo, nangona kunjalo. Thetha ugqirha wakho malunga nesilinganiso esifanelekileyo. Ifomu yesimo somlomo (amacwecwe):
I-Avanafil ifika njengetyulethi ukuba ithathe ngomlomo. Kuba amadoda athatha i-100- mg okanye i-200-mg, i-avanafil idla ngokuthathwa okanye ngaphandle kokutya njengoko kuyimfuneko, malunga nemizuzu eyi-15 ngaphambi kokusebenza ngokwesondo, akukho ngaphezu kweyodwa ngosuku .Kuba amadoda athatha i-50-mg dose, u-avanafil idla ngokuthatyathwa okanye ngaphandle kokutya njengoko kuyimfuneko, malunga nemizuzu ye-30 ngaphambi komsebenzi wesondo. Musa ukuthatha i-avanafil kaninzi ngaphezu kweyure kwi-24 iiyure. Landela imiyalelo yegqirha okanye izikhokelo zelebula. Ulwazi olulandelayo luquka kuphela amanani athile ale mayeza. Ukuba umthamo wakho uhlukile, ungatshintshi ngaphandle kokuba ugqirha wakho akuxelela ukuba wenze njalo. Inani lemveliso oyithathayo lixhomekeke kumandla oliyeza. Kwakhona, inani lamanani othabathayo ngosuku, ixesha elivunyelwe phakathi kwamanani, kunye nobude bexesha othabatha amayeza lithembele kwingxaki yonyango osebenzisa ngayo iyeza.
5. Iingcebiso zomsebenzisi ngomlomo kwi-Vardenafil HCL powder kunye ne-Avanafil powder
Ukuhlaziywa kweVardenafil HCL powder I-Avanafil powder ukujonga
Ngokuqhelekileyo amava amaninzi. Uninzi lweziphumo eziqinileyo kunye nokuphathwa kancinci nokuxinzelela kwentloko. Akunakulungi ngokwenene ukubizwa ngokuba yintloko. Nangona kunjalo kukho izihlandlo ezimbalwa apho le nyikrokre indivumele ukuba ndihlasele ngokunyanisekileyo kwezesondo. Ndizibuze ukuba le chiza liphazamise i-orgasm kodwa mhlawumbi oko kuyenzeka ukuba yi-63. Ngethamsanqa ndagcina isilungiso ngoko ndakwazi ukukholisa umlingane wam (ininzi) ebaluleke kakhulu kunam ye-orgasm yam. Izibonakaliso zamachiza kukuba zingathathwa ngaphandle kokutya kodwa ziphephe kuphela iidifesti. Ndifunda ambalwa ukuphonononga kwi-Intan ukuba ukuthatha ngesisu esingenalutho kuvelisa iziphumo ezingcono. Ndizakuzama. Ngamanye amaxesha xa ndiyifumayo, andiyiva iimpawu kuwo onke amaxesha kwaye ngamanye amaxesha ndicinga ukuba akunakuphumelela. Ndiyazibuza ukuba kunokwenzeka yini ukunyamezela. Njengoko kumiselwe, ndathabatha i-1 / 2 ipilisi (100mg) yaseStendra emva kobusuku bokuphuza abantu abadala, ukutya okulungileyo nokudanisa. Ngaphantsi kwe-30 min kamva, kunye nokunyusa kwakhe, ndandiyingozi kunanini ngaphambili kwaye ndagcina i-2 hrs. Sivuya kakhulu. Akukho miphumo emibi. MANJE, nantsi inxalenye enhle ............. Iiyure ze-4 kamva, ngaphandle kokuthatha enye Stendra, kusetyenziswa iiyure ze-4 emva koko, into efanayo. Umfazi ompofu wayeyilungu le-24 elandelayo. Ndiyabulela uStendra ps- wazama iCialis neViagra ngexesha elidlulileyo kunye neziphumo ezimbi kunye nezimbi.
6. Ziziphi iimpembelelo ezisecaleni ze-Vardenafil HCL powder kunye ne-Avanafil powder?
Isiphumo esisezantsi seVardenafil HCL powder Impembelelo yangasemva ye-Avanafil powder
ISEXWAYISO / UKWENZISWA: Nangona kungenakwenzeka, abanye abantu banokuba nemiphumo emibi kwaye ngezinye iziphumo ezinobungozi xa bethatha isiyobisi. Tshela ugqirha wakho okanye ufumane uncedo lwezonyango ngokukhawuleza ukuba unayo nayiphi na impawu okanye iimpawu ezilandelayo ezinxulumene nomphumo obi kakhulu:
-Iziganeko zempendulo ezithintekayo, njenge-rash; mihlathi; ukubetha; obomvu, ukuvuvukala, ukukhenkceza, okanye ukukhupha isikhumba kunye okanye ngaphandle kwemfiva; ukujikeleza; ukuqina kwisifuba okanye emqaleni; ingxaki yokuphefumla, ukugwinya, okanye ukuthetha; ukuthoba okungavamile; okanye ukuvuvukala komlomo, ubuso, imilomo, ulwimi, okanye umqala.
- Intlungu yesifuba okanye uxinzelelo okanye intliziyo esheshayo.
-Inhliziyo yentliziyo ayifuni ukuvakalelwa.
-Okubi kakhulu ukungcola okanye ukudlula.
-Ubuchule kwicala le-1 yomzimba, inkathazo yokuthetha okanye ukucinga, utshintshe ukulinganisela, ukuxhamla kwelinye icala lobuso, okanye ukujonga amehlo.
-Cwangcisa ugqirha wakho ngokukhawuleza ukuba unesilingo esibuhlungu (ipenisi elukhuni) okanye ulungiso oluhlala ixesha elide kuneeyure ze-4. Oku kwenzeka nangona ungalalani ngesondo. Ukuba oku kungaphathwa ngokukhawuleza, kunokukhokelela kwiingxaki zesini eside kwaye ungenako ukulala ngesondo.
Ezinye iziphumo zecala zingaba zibi. Ukuba ufumana enye yale mpawu, biza ugqirha wakho ngokukhawuleza okanye ufumane unyango lwezonyango:
-ukulungiswa okuhlala ixesha elide kuneeyure ze-4
Ukulahleka kombono kwelinye okanye zombini amehlo (jonga ngezantsi ukuze uthole ulwazi oluninzi)
Ukulahlekelwa kwintetho evezwayo (jonga ngezantsi ukuze uthole ulwazi oluninzi)
Avanafil kunokubangela ezinye iziphumo ezibi. Biza ugqirha wakho ukuba unayo nayiphi na ingxaki engaqhelekanga xa usebenzisa le mayeza.
7. Ixesha elide iVardenafil HCL powder lihlala ixesha elingakanani?
Ngelishwa, okwangoku akukho mayeza angenza i-ED ihambe kakuhle. Zonke i-PDE5 inhibitors eziquka i-Vardenafil HCL powder ukunciphisa inani le-PDE5 kwinkqubo yakho kuphela ixesha elithile elibizwa ngokuba 'li-half half life'. Emva koko zitshitshiswa kwaye zithathwe kwi-system yakho kunye ne-PDE5 ibuyela kwizinga layo langaphambili.
I-Gestodene powder yokuthengisa: Izinto ze-10 ezaziyo malunga ne-Gestodene powder
Ubude bentshukumo ye-Vardenafil HCL powder ihluka ukusuka kwisigulane ukuya kwisigulane kuxhomekeka kwizinto ezibonakalayo zomntu ngamnye. Ngokumalunga nolwazi olusemthethweni olukhishwe yi-FDA kunye (iGlaxoSmithKlein kunye ne-Bayer AG), kufuneka ulungele ngokusemthethweni ngesondo ukuya kwii-4-5 iiyure emva kokuba uthathe ipilisi. Enyanisweni, ukugweba kumava ethu nakwezinye izinto abantu bathi nge-HCL powder, iiyure ze-4-5 yinto efutshane kakhulu enokuyilindela kule mayeza. Amadoda amaninzi athi uLevitra uyazigcina zihamba ubusuku bonke kwaye zifike ngosuku olulandelayo, okwenza iiyure ze-10-12. Ngokuqinisekileyo, oko kuxhomekeke kwiimeko ezahlukeneyo, njengokuba i-ED yakho imbi, ingaba uthatha nayiphi na enye ingxaki okanye akunjalo, nokuba unobandezelekayo naziphi na ezinye iingxaki zempilo ezingenza ukuba i-ED yakho ibe nzima kwaye njalo njalo . Nangona kunjalo, ungasebenzisa loo ngcaciso malunga neeyure ze-4-5 njengeqalo lokuqala kwaye ubone ngakumbi indlela i-Vardenafil HCL iphambili ngayo.
8. Ingaba iVardenafil HCL powder ikhuselekile?
Oku, kwakhona, ngumbuzo okhohlakeleyo, iimpendulo ezahlukileyo kuye kuxhomekeke kukuphi umenzi othile esithetha ngaye. Enyanisweni, nokuba negama le-Levitra ayikho i-100% ephephile njengoko engasebenzi kakuhle ngezinye iigulane kwaye kufuneka igwenywe zizigulane ezineemeko ezithile zempilo. Oku kusebenza nakwinkoliso yamaninzi. Nangona kunjalo, kukho iindidi ezithembekileyo ze-vardenafil ezithathwa njengengozi ngaphezu kweziyobisi ngabavelisi abathembekileyo ngenxa yokugxininiswa kwe-vardenafil kuzo. Ngokomzekelo, uthatha enye yezi pilisi kwaye uqaphele ukuba asebenzi kakuhle. Ukwandisa umthamo wakho kwiipilisi ezimbini kwaye ufumane ukulungiswa okugqibeleleyo. Kodwa kuthekani ukuba i-batch elandelayo yale pilisi inayo i-vardenafil engaphezulu kuzo? Ewe, ngokuqinisekileyo, unokudlula phezu kwabo kwaye oko kunokubangela inani elincinci kakhulu okanye eliyingozi nakwiimeko ezinobungozi ezinjengexinzelelo olukhulu lwegazi, ukuhlaselwa yintliziyo, ukulahlekelwa ngokukhawuleza kokuva kunye / okanye umbono kunye nokunye okunjalo.
9. Ngaba i-vardenafil i-HCL powder esemthethweni?
Oku kuya kuxhomekeka apho usekelwe khona kwaye nokuba uthengisa okanye uthengisa. Ngokuqhelekileyo, ngenxa yeli patent elikhethekileyo le-GSK neBayer, i-Levitra yesizukulwana ikhutshwe kumazwe amaninzi afana ne-US, i-UK kunye namazwe aseYurophu. Ama-Pharmacies awavumelekanga ukuba athengise ama-generics apho kwaye akukho nto ayifanelekanga, kunjalo. Nangona kunjalo, kukho iindaba ezilungileyo: nangona ukuthengiswa kwama-generics kukhankanywe ngokucacileyo, ukuzithenga ngokuqhelekileyo akuthathwa njengoluphulo-mthetho.
Eyona nto ininzi imithombo iyavuma ukuba ukungenisa nokungenisa kwakhona akukho mthethweni, ubuncinane eMelika. Nangona kunjalo, musa ukukhawuleza ukuvala isicatshulwa se-intanethi kwi-intanethi oyifunayo kwaye uyisuse kwimbali yakho yokukhangela. Yonke imithombo ngaphandle koko yongeza ukuba akuzange kubekho ityala elilodwa xa kubhekene neentlawulo ezingabonakaliyo zokuzisa inani elincinci leepilisi ze-ED kweli lizwe. Kwaye ingcamango 'yexabiso elincinci' ngokwenene ayinanto encinci kangangoko banokucinga ngayo - ngokubhekiselele kumbono ongenakubalwa, kufuneka ube yi-100% ephephile xa ukhupha iinyanga ezi-3 ze-vardenafil i-HCL powder ngaphesheya komda - mhlawumbi emva kwakho uhambo oluya phesheya okanye ngeposi. Ngokuqinisekileyo, unconywa ukuba ube nomyalelo wakho xa ufumene umyalelo wakho we-Levitra oqhelekileyo - kodwa nangona ungenayo enye, eyona nto ingenzeka kuwe ifumanisa iipilisi zakho ezikhutshwe ngamasiko - akukho nto ityala .
Kufumaneka phantsi kweempawu ezingenakubalwa ngaphandle kwe-Levitra vardenafil i-HCL powder ayisoloko ephawulwe kumasiko, ngoko kukho ithuba lokuba umntu uza kubuza malunga ne-oda yakho xa uyifumana.
Nangona kunjalo, asikucebisi ukuba ulandele ngaphezulu kweepilisi ze-24 ze-Levitra ngokukhawuleza ukuba inani elinjalo libhekwa njengexabiso eliphezulu lokuthengisa kunye kwaye lunokukhathala kwizithethe.
10. Kuphi ukuthenga i-Vardenafil HCL powder?
Ukuba usekelwe kwelinye lamazwe apho ukuthengisa i-vardenafil i-HCL powder inqatshelwe, unokufumana kuphela kwi-intanethi kwi-pharmacy yangaphandle ye-intanethi. Sincoma kakhulu ukuba ungathenga i-vardenafil ye-HCL powder njengokuba ngokuqhelekileyo kunika i-Levitra generics yemfanelo ehloniphekileyo kwixabiso eliphantsi kakhulu ukusuka ku-AASraw. Eyona nto ibaluleke kakhulu yi-AASraw yokuThuthwa koKhuseleko.
Siyathemba ukuba ufumene ulwazi olunikeziweyo kweli nqaku kwaye lunokukunceda ukhethe imishanguzo yakho ye-vardenafil epheleleyo kwaye uyithenge ngokukhuselekileyo. Khumbula ukuba i-Viagra generic inokukhuseleka njengemveliso yegama lomhlaza xa iveliswa ngumenzi onokwethenjelwa kwaye ithengwe kwi-pharmacy ethembekileyo. Kukho iinkcukacha ezininzi zeekhompyutheni kwi-Intanethi kubandakanywa zethu kwaye kufuneka zikwazi ukukunika zonke iinkcukacha zokukhusela kunye nezilinganiso ozifunayo. Ngaphandle koko, uhlala uvumelekile ukuba ukhangele iiforam ezahlukahlukeneyo kunye neebhodi zeemyalezo uze ubone ukuba abantu bantwini bathetha ntoni ngale nto okanye ukuba amayeza e-ED apho. Inhlanhla yokukhetha nokuthenga!
Indlela Yokukwazi Konke I-Cetilistat (Cetislim) Ubunzima be-Weight Loss	Thenga Ubungakanani beYK11: Iingcebiso kunye neziNzuzo kunye nemiphumo emibi